Ithegi: iifom | Martech Zone
Sebenzisa i-WordPress njengenkqubo yolawulo lomxholo wakho kuyinto eqhelekileyo kule mihla. Uninzi lwezi ndawo luhle kodwa lusilela nasiphi na isicwangciso sokufaka ukuthengisa ngaphakathi. Iinkampani zipapasha amaphepha amhlophe, uphononongo lwamatyala, kunye nokusebenzisa iimeko ngeenkcukacha ezinkulu ngaphandle kokufaka iinkcukacha zonxibelelwano zabantu abazikhuphelayo. Ukuphuhlisa iwebhusayithi kunye nokukhuphela okunokufumaneka kwiifom zobhaliso sisicwangciso esihle sokuthengisa. Ngokufaka iinkcukacha zonxibelelwano okanye
I-SharpSpring idibanisa ukuthengisa okuzenzekelayo kunye neCRM kwisisombululo esinye sokuphela senzelwe ukukhulisa ishishini lakho. Iqonga labo elityebileyo linayo yonke into oyifunayo kunye nokunye ukuthengisa ngaphakathi kunye nokuthengisa okuzenzekelayo: i-imeyile esekwe ekuziphatheni, ukulandelela umkhankaso, amaphepha okufika ashukumisayo, umakhi webhlog, ucwangciso lweendaba zosasazo, iingxoxo ezikrelekrele, iCRM kunye nokuthengisa okuzenzekelayo, umakhi wefom enamandla, ukunika ingxelo kunye nohlalutyo, Isazisi seNdwendwe esingaziwayo, nokunye okuninzi. Iqonga lisetyenziswa zii-SMBs kunye neenkampani zeShishini, kodwa abathengi abaphambili beSharpSpring yidijithali